Manàna ny fitaovana ilaina an-tànana hanaovana ilay asa
Ao amin'ny FXCC dia lasa lavitra be izahay mba hanangona fitaovana fampiasana mahasoa sy be dia be. Nifanaraka tamin'ny manam-pahaizana izahay; Avy any ivelany, ao an-trano ary manan-danja indrindra amin'ireo manam-pahaizana manan-danja indrindra - ireo mpanjifanay, mba hanomezana ity lisitra feno ity, izay hanampy amin'ny fitaovam-pifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fivarotana tsena.
Ity loharanom-pampianarana manan-danja ity dia hahitana singa lava be lava ho an'ny mpanjifa ho fantatra kokoa ankoatra ny fivoaran-javatra vaovao. Ny fepetra takian'ny mpivarotra efa za-draharaha; kalandrie ara-toekarena, dia mifandray amin'ny fanampiana farany; singa manokana mpizara FX. Na izany aza, amin'ny fampiasana ny kalandrie voamarina ho ohatra, dia maneho ny haavon'ny fitandremana sy ny antsipiriany izay nidirantsika, mba hanomezana ireo mpanjifanay amin'ireo loharano tsara indrindra azo.
Resy lahatra isika fa ireo fitaovana ireo dia hanolotra ny fahafahana ho an'ny mpanjifantsika hampivelatra ny fahaiza-manaony ary hahafinaritra kokoa ny traikefa ara-barotra. Ny fitaovana tsirairay dia nofantenana mba hanana toetra manokana mba hanomezana tombontsoa manokana.
Raha ny marina dia ny mpampiasa vola sy ny mpivarotra haino aman-jery indrindra dia tokony hitazona eo amin'ny sehatr'izy ireo, na misokatra amin'ny tabilao hafa ao amin'ny solosainy. Ny kalandrie ara-toekarena FXCC dia azo atao ankehitriny mba hifanaraka amin'ny mari-pankasitrahana manokana ataon'ny mpivarotra.
Ny fahafantarana ny toerana misy ny mpivarotra FX dia napetraka fa tsy misy vidiny raha manapa-kevitra momba ny tari-dàlana an'ny mpivarotra.
Ity mari-pamantarana am-pihetsika ity, izay mifototra amin'ny angon-drakitra ara-tantara, dia ahafahan'ny mpivarotra varavarankely ho fihetseham-pon'ny mpandraharaha manerantany.
Miaraka amin'ny fotoam-pivoriana matetika dia miova, ohatra, ho vokatry ny fotoam-pahavaratra britanika, tena ilaina ny mitazona fanairana amin'ireo tsena marina, toa an'i New York, ny mpivarotra.
Fandaniam-bola amin'ny Central Banks
Araka ny fanapahan-kevitry ny tahan'ny banky afovoan-tanindrazana dia tokony hahafantatra tsara ny tahan'ny fototra eran-tany, indrindra fa avy amin'ireo banky foibe tompon'andraikitra amin'ny vola lehibe toy ny; USD, GBP, EUR, YEN.
Ny fanadihadian'ny tsenan'ny FX dia tonga amin'ny endrika roa samihafa; fanadihadiana ara-teknika sy fototra. Ny mpivarotra dia afaka mampifandray ny fifandanjana roa samy hafa, mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra kokoa
Ny fanaraha-maso ny zava-mitranga vaovao sy ny famoahana angona dia singa manan-danja amin'ny varotra mahomby. Na izany aza, ny vaovao manimba, ny fanadihadiana ara-teknika, ny fanadihadiana fototra sy ny hevitra dia manome koa ny fahatsapana ny maha-lohalaharana ny tsena.
Tandremo amin'ny fotoana mahamety ny teny avy amin'ny ECN, ny tambajotra elektronika nomerika, fa ny baikon-tsika ataontsika dia mifanaraka amin'ny baiko. Io fitambaran'ny liam-bidy manaparitaka, miaraka amin'ny fikambanan'ny FX, dia miantoka fa ny mpanjifa FXCC dia atolotra ny marina sy tsara indrindra amin'ny vidin'ny 24 / 5.
Ny kameray isan-karazany dia manome tolotra "tombony azo tsoahina". Raha mila: manombatombana ny habetsaky ny tarehimarika, avereno ny mari-pana izay ilainao, mila mandinika lanjan-danja iray hafa, dia hanampy ireo kalkulator ireo.